Waraana garee humnoota Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, Oromoon Walloo gara garee humnoota MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa goree humna Naannoo Tigiraay irratti akka duuluuf, waamichi taasifamuuf itti-fufee jiraachuu.
Mootummaa Naannoo Amaaraaf daboo ba’ee, humna Naannoo Tigiraay (ABUT) irratti waraana akka banuuf jecha, qaamota Mootummaa Naannoo Amaaraatiin, Oromoo Walloof waamichi taasifamaa jiraachuu. Oromtichi maqaan isaa Mallasaa Caalaa jedhamu, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Buraayyuu keessatti, mana hidhaa keessatti ajjeefamuun, reeffi isaa badheetti darbamuu.
Dhukaasa Jimaata Adoolessa 9, 2021, dargaggoota Oromoo nagaa irratti, Poolisoota Humna Addaa [Oromiyaa] fi Milishoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii, Ganda Ganjii Deembii, iddoo addaa Janjamoo jedhamutti banameen, dargaggoonni Oromoo ja’a iyyuu iddoo tokkotti galaafataman.
Sochii fi tarkaanfii WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, akkasumas akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi shoora Uummanni Oromoo QBO keessatti bahachuu qabu irratti xiyyeeffachuun, marii Itti-aanaa Ajajaa WBO Zoonii Giddu-gala Oromiyaa Lixa Shaggar, Jaal Jirranus waliin taasifame.
Gandeen Konyaa Gujii Lixaa keessatti argaman, kanneen baay’inaan 100 (dhibba-tokko) olitti tilmaaman keessaa, caasaan Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa (Paartii Badhaadhinaa) guutumaa-guutuuttii diigamuun gandeen kunniin to’annoo WBO jala galfamuu.
Qabsoon Bilisummaa Oromoo akka galma hin geenyeef maaltu taasise? Dogoggoroota mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dhalatanii fi kufaatiilee Uummata Oromoo mudataniif komatamaan eenyu? Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Uummanni Oromoo Galma Qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Marii Oromticha Walloo tokko waliin taasifame.
Tikfatee-bultoonni Oromoo qabata WBOn hidhannoo hiikkachiifamaa jiraachuu
Oromoonni baay’inaan 1000 (Kuma-tokko) ol ta’an, Giddu-gala Oromiyaa, Ona Gidabarat keessatti hidhamuun gidirfamaa jiraachuu. Oromoota hidhamanii jiran kanneen keessaas baay’inaan 300'tti kan tilmaaman, Magaalaa Kaachis keessatti, mana dhiphoo keessatti baay’inaan hidhamuun, akkasumas, nyaata ga'aa fi wal'aansa fayyaa dhorkamuun dhibeelee daddarboo garaagaraaf saxilamaa jiraachuu.